နိုင်ငံရေးသမားရောင်းရန်ရှိသည် အပိုင်း ၄ နိဂုံး (မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ NED ကွန်ရက်) | The FNG
January 12, 2014 · by 21 South News	· in သတင်း ဆောင်းပါး, OP / ED.	·
ဇော်ဝင်း ၊၊နာမည်နဲ့ လုပ်ရပ် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်တဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ကတော့ NED ပါ။ နာမည်က
National Endowment for Democracy ဒီမိုကရေစီ ကူညီထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့ပါ။
လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေက တော့ ဒီမိုကရေစီကို ဟန့်တားတဲ့ လုပ်ရပ်၊ သူတပါး
နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးကို ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားနဲ့ တသားတည်းဖြစ်အောင် ခြယ်လှယ်တဲ့
နာမည်ခံတာက ဒီမိုကရေစီ ၊ လက်တွေ့လုပ်တာက သူတို့ အကျိုးပါ။ သူတို့ အကျိုးဆိုတာ
အမေရိကန် ပြည်သူတို့ရဲ့ အကျိုးစီးပွားလို့ အဓိပ္ပါယ် မထွက်ပါဘူး။ အရင်းရှင် ကော်ပိုရေးရှင်း
ကြီးတွေ ၊ ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး လက်တဆုပ်စာ လူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားလို့သာ အဓိပ္ပါယ်
ထွက်ပါတယ်။ NED တို့ CIA တို့ဟာ အဲဒီ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး
လက်တဆုပ်စာကိုပဲ ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး လက်တဆုပ်စာကို ကိုယ်စားပြုပြီး
၊ အများစု အလုပ်သမား ၊ လယ်သမားတွေကို ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲသားထုကြီးကို
ဆန့်ကျင်ခြင်းကိုယ်၌သည်ပင် ဒီမိုကရေစီရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်လာပါတယ်။
ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေ အတွက်တော့ အမြတ်အစွန်းဟာ အဓိက ရည်မှန်းချက် ဖြစ်ပြီး
အဆုံးစွန် မျှော်လင့်ချက်က ဘာမဆို ရောင်းနိုင်ခွင့် ဘာမဆိုဝယ်နိုင်ခွင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အမေရိကန်ပဲလို့ ထင်နေသူတွေ ၊ အမေရိကန်ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီပဲလို့
ထင်နေသူတွေ အတွက်တော့ National Endowment for Democracy ဒီမိုကရေစီ
ကူညီထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့ ဆိုတဲ့ နာမည်လှလှလေးကြောင့် ချက်ချင်းကြွေသွားလောက်ပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖျက်ဆီးတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို စောင့်ကြည့်နေသူ အမေရိကန်ပြည်တွင်း
ဒီမိုကရက်နဲ့ ကမ္ဘာတဝန်းက ဒီမိုကရက်တွေ အတွက်တော့ NED ဟာ ကြောက်စ
ရာကောင်းလောက်အောင် အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တခုဖြစ်နေပါတယ်။
NED ကို ၁၉၈၃ ခုနှစ် သမ္မတ ရေဂင် လက်ထက်မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ ၁၉၇၀ ကျော်ကာလမှာ
ဝါးတားဂိတ် အရေး ပေါ်ပေါက်ပြီး သမ္မတ နစ်ဆင်ဟာ သူ့ရဲ့ ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့်
ရာထူးက နှုတ်ထွက် သွားရတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့ နောက်မှာ စီအိုင်အေဟာ လွှတ်တော်ကော်မတီပေါင်းစုံရဲ့
ဆက်တိုက် စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ သီတင်းပတ်တိုင်းလောက်မှာ
စီအိုင်အေ သတင်းတွေ တက်နေတယ်။ စီအိုင်အေရဲ့ ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေသာမက၊ တခါတရံမှာ
ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာတွေပါ ပေါ်ထွက်လာတယ်။ စီအိုင်အေအဖွဲ့ဟာ အကြီးအကျယ်နာမည်ပျက်ပြီး
အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရအဖွဲ့အတွက် လည်း အရှက်ရစရာ ဖြစ်လာတယ်။
စီအိုင်အေ အရာရှိဟောင်း ဖြစ်တဲ့ ဖိလစ် အေဂျီး (Philip Agee) က “စီအိုင်အေ အရာရှိဟောင်း တဦးပြောပြသော အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများကို အသုံးပြု၍ အစိုးရများကို ဖြုတ်ချရန် အမေရိကန်၏ ကြံစည်ဆောင်ရွက်မှုများ” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ NED စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
“၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်တွေကို ဆောင်ရွက်ဖို့ NED ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းသစ်ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်ဆိုပေမဲ့ တကယ်တန်း အသစ်တွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်က စပြီး စီအိုင်အေဟာ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်းတွေကို လျှို့ဝှက်ငွေထောက်ပံ့ပြီး ကြိုးကိုင်ကစားတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့ပြီးသားပါ။
စီအိုင်အေရဲ့ အဲဒီအလုပ်ကို NED လက်လွှဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။”
← ဖန်သား ကွေး တီဗွီ တွေ ဈေးကွက် မှာ လူကြိုက်များလာ
ကျွန်ဘ၀ မှာ ၁၂ နှစ်ကြာ ရုပ်ရှင်ကား အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆု ရ →
One response to “နိုင်ငံရေးသမားရောင်းရန်ရှိသည် အပိုင်း ၄ နိဂုံး (မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ NED ကွန်ရက်)”
kyawlwin htun January 12, 2014 at 3:27 pm · ·
How fear they are!
I’m going to cover getting eough five precepts for my end.